के हो निमोनिया ? जोगिने कसरी ? – Dailny NpNews
के हो निमोनिया ? जोगिने कसरी ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, भाद्र १३, २०७८ समय: १६:००:०२
भरतपुर अस्पतालमा कार्यरत नेपाल पेडियाट्रिक सोसोइटीका उपाध्यक्ष डा. युवनिधि बसौलाका अनुसार निमोनिया धेरै प्रकारको हुन्छ। कसैले जन्मजात पनि निमोनिया लिएर आएका हुन्छन्। भर्खरै जन्मेको बच्चाको ६० भन्दा बढी श्वासदर छ भने निमोनिया भएको भनिन्छ।
अनि दुई महिनासम्मको ५० श्वासदर छ र दुईमहिना भन्दा माथिको बच्चाको ४० भन्दा बढी श्वासदर भयो भने निमोनिमया भएको हो । त्यसैले फोक्सोको एक भागमा पनि यसले संक्रमण गर्न सक्छ भने धेरै ठाउँमा फैलिन पनि सक्छ। केमिकल निमोनिया पनि हुन्छ। नेपालमा सरदर एउटा बच्चालाई वर्षमा ४–५ चोटी निमोनिया भएको मानिन्छ।
उनी भन्छन्, ‘निमोनियाबाट बच्न नसकिने होइन। रुघाखोकी त संसारको जुनसुकै कुनामा पनि लाग्छ । तर रुघाखोकी लागेपनि विकसित देशमा निमोनिया हुने सम्भावना कम हुन्छ। किनकी उनीहरुको पोषणको अवस्था राम्रो छ। सबै बच्चाहरुले खोप लिएका हुन्छन्। वातावरण राम्रो छ।
रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता राम्रो हुन्छ। त्यसैल बाल मृत्युदर विदेशमा कम हुन्छ।’ तर नेपाल जस्तो देशमा रुघाखोकी बिग्रेर निमोनिया लाग्ने सम्भावना बढी हुने उनको अनुभव छ। नेपाली बच्चाहरु कुपोषित हुन्छन्। रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कम हुन्छ । उनीहरुले सबै खोप पनि पाउँदैनन् । सरकारले दिइराखेको खोपले पनि निमोनिया रोक्ने काम गर्छ । बच्चालाई चिसोबाट जोगाउने, न्यानो पारेर राख्ने गर्नुपर्छ। त्यसैगरी धुला धुँवाबाट बचाउनुपर्छ।
खोकी लाग्ने,चाँडो–चाँडो श्वास फेर्ने,कोखामा हान्न (श्वास फेर्दा छाती र करङको भाग धस्सिने)श्वास फेर्न गाह्रो हुने,खोकी लाग्ने,दुध चुस्न नसक्ने आदि ।